साहित्य - Dalit Online
फिल्म जयभिम : भारतमा बिक्न छोडेको मार्क्सलाई अम्बेडकर सहारामा पुर्नजीवित गरिदैंछ
दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगले भर्खरै वहुचर्चित फिल्म जयभिम रिलिज गर्यो । उक्त फिल्मले दर्शकहरुको मन जित्न सफल रह्यो तथा यो फिल्मको व्यापारले बलिउड मात्र होइन, हलिउडको चर्चित फिल्महरुलाई पनि मात दिएको छ । जयभिम फिल्म 1990 को दर्शकमा भारतीय दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा भएको आदिवासी उत्पीडनको सत्य घटनामा आधारित छ । फिल्मको पहिलो दृश्यमै जेलबाट कैदमुक्त […]
प्रकाश सपूतको लालित्यपूर्ण नृत्यले सजिएको डाँडा घरे साइँली
प्रकाश सपूत पछिल्लो समयका चर्चित युवा कलाकार हुन । गलबन्दी दोहोरी गीतवाट हिट भएका उनले कलाका विभिन्न माध्यमबाट नेपाली गीत संगीत मात्रै नभएर राजनैतिक चेतना समेत जगाएर नेपाली समाजलाई सम्वृद्ध बनाएका छन् । उनको सवैभन्दा मनपर्ने पक्ष भनेको, चर्चाको तथा ख्यातीको शिखरमा पुगे पछि दलित समुदायवाट जन्मेका कलाकारहरुले आफ्नो परिवेश विर्सन्छन र त्यस्तै पर्यो […]
काठमाडौं – बेलायत निवासी समाजसेवी राजशान्ति सुनार दम्पत्तीले उत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड पाएका छन् । लमजुङमा जन्मिएका समाजसेवी एवं गीतकार राजकुमार सुनार र शान्ति सुनारले लेखेको गीत ‘जसलाई मैले’ले ‘नेशनल गण्डकी म्यूजिक अवार्ड-२०७८’ जितेको हो । सोही गीतका संगीतकार बिबी अनुरागीले उत्कृष्ट संगीतकार र एरेन्जरको अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । पोखरामा हालै आयोजित ‘नेशनल गण्डकी म्यूजिक अवार्ड–२०७८’ […]
कोलाहलपूर्ण दृष्य देखेँपछि “क्वारेन्टाइन” उपन्यास जन्मिएको हो : पदम विश्वकर्मा
काठमाडौं – महामारीको रापमा पिल्सिएको मानव जातिको दुःख, रोदन, चीत्कार, सन्ताप, हाहाकार आदि पक्षलाई कारूणिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उपन्यास हो, “क्वारेन्टाइन” । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्वअध्यक्ष एवं बोर्ड परिषदका उपाध्यक्ष साहित्यकार पदम विश्वकर्माद्धरा लेखिएको चौथो कृति “क्वारेन्टाइन” हो । “क्वारेन्टाइन” उपन्यासको भाषा सरल तर बोधगम्य छ । समग्रमा पुस्तक विश्व मानव जातिकै अन्तहीन संकटको जीवन्त […]
साहित्यकार पदम विश्वकर्माको “क्वारेन्टाइन” उपन्यास सार्वजनिक
काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं बोर्ड परिषदका उपाध्यक्ष साहित्यकार पदम विश्वकर्माको चौथो कृति “क्वारेन्टाइन” उपन्यास सार्वजनिक भएको छ । पदम विश्वकर्माको चौथो कृति “क्वारेन्टाइन” उपन्यास शुक्रबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, अनेसास बोर्ड परिषदका अध्यक्ष गीता खत्री, अनेसास केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सल्लाहकार […]
‘नेपालका रैथाने गन्धर्व सभ्यत’ पुस्तकमा डा. यामवहादुर किसानको टिप्पणी
काठमाडौं –f नेपाल भौगोलिक रुपमा सानो देश भएता पनि भूगोल, जातजाति तथा भाषाभाषीको विशाल विविधता भएको देश हो । यसैको उदाहरण हो, १ सय २५ जात जाति तथा १२३ भाषाभाषीलाई लिन सकिन्छ । ती १२५ जातजाति मध्ये दलित भित्रका २६ जातहरु पनि पर्दछन् । नेपालका यस्तै जातजाति तथा भाषाभाषी तथा उनीहरुको संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा […]
विद्रोही डिकवहादुरका विद्रोही विचारहरु !
नेपालको दलित आन्दोलनलाई हामी यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै पुरानो अर्थात विक्रम सम्वत १९९६ देखि प्रजापरिषद पार्टीले सुरु गरेकै ताका वाग्लुडका भगज सर्वजीत विश्वकर्माले पनि सुरु गरेको र २००४ सालमा त विश्वसर्वजन संघ खोलेर अगाडि वढेको देखिन्छ । आन्दोलन यति पुरानो हुँदाहँुदै पनि यो विभिन्न आरोह अवरोहवाट गुज्रिएको छ । कुनै पनि आन्दोलन विचार र संगठन […]
तिनताका रञ्जित र सुनैना सँगै हिँड्थे, खान्थे, खेल्थे । उनीहरूको सामिप्यता देखेर अन्य सहपाठीहरू ईष्र्या गर्थे । कुरा रञ्जितको घरसम्म पुग्यो । सुनैनासँगको बढ्दो हिमचिम रञ्जितका बाबुआमालाई मन परेको थिएन । ‘धेरै सम्झाएँ, छोराको बुद्धि फि¥यो भनेको फेरि उस्तै ! हामी बाहुन, सुनैना ‘पानी नचल्ने जातकी’ केटी ! जातभात, रितिरिवाज क्यै मिल्दैन । सबैले तिमेरका […]
मोडलिङमा जम्दै मदन नेपाली
काठमाडौं — जुम्ला देपालगाउँका मदन नेपालीलाई मोडलिङमा लाग्ने सानै देखीको इच्छा थियो । उनी बिद्यालय पढ्दाखेरी नै मोडलिङमा सामान्य प्रयास गर्थे । प्रयास गर्दा गर्दा उनले बिद्यालय स्तरका कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर बिभिन्न सम्मान पनि पाए । तर, पारिवारिक आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटताले उनको इच्छा पुरा हुन सहज थिएन् । गाउँमा हुने विवाह, पूजा तथा […]
जातीयताले रोक्न नसकेको प्रेम
आफ्नो लक्ष्यप्रति अटल मोहन शारदालाई प्रिय लाग्न थाल्यो । त्यस रात शारदा खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिएकी थिई, गजबको सपनादेखी । दुलही बनी सिँगारिएको । दुलहासँग माहुर चटाइ खेलेको । सपनाले सम्पूर्ण शरीरमा मृदु–झङ्कार छोड्यो । आँखा खुल्नेबित्तिकै उसले ऐनामा प्रतिबिम्ब हेरी । आफ्नो रूप आजभन्दा पहिले यति सारो प्यारो कहिल्यै लागेको थिएन उसलाई । उसले […]